Taariihkda Degmada Luuq. W, Q Proff, Yaxye Sheekh Caamir | Laashin iyo Hal-abuur
Luuq ( Lugh) waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu da’da weeyn Somalia, sida ku cad qoraalka Captain Thomas oo ingriis ahaa, uuna qoray 1811. waxaa uuna leeyahay waxaa ku tiil 300 guri waxa uu leeyahay waxa jiray waqti ay Luuq, xamar ka weeyneed. Waxa magacaa loogu bixiyay magaalada oo wabiga Juba ( wabi ganaane) dhinac kasta uu uga wareegsan yahay waxa ay lahaan jirtay darbi 3 Mitir ahaa, kadibna talyaaniga ayaa ka dhisay darbi kale lehna hal irid oo kaliya, Luuq waxaa ku taal buundo aad u weeyn.
Sawirada 22 ka hore waa taariikhdii hore iyo qoraalo Luuq ka hadalayo iyo 9 ah casrigan oo muujinaya horuumar la’aanta magaalada Luuq.
Haddii aan wax khalday waad sixi kartaa, dhaliili kartaa, wax ku dari kartaa, Aragtidaadu waa noo muhim.
W, Q: Proff Yaxye Sheekh Caamir